भारतलाई लगातार झड्का, ३१४ रनको लक्ष्य पूरा गर्न कति सम्भव? - Everest Dainik - News from Nepal
भारतलाई लगातार झड्का, ३१४ रनको लक्ष्य पूरा गर्न कति सम्भव?
काठमाडौं, फागुन २४ । एकदिवसीय सिरिजको तेस्रो खेलमा अष्ट्रेलियाले दिएको ३१४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारतले सस्तैमा ३ विकेट गुमाएको छ । भारतले शिखर धवन (१), रोहित शर्मा (१४), र अम्बाती रायडूलाई (२) लाई ७ ओभर नपुग्दै गुमाएको हो । म्याट कमिन्सले २ र जय रिचडसनले एक विकेट लिए ।